Amanani 29 (Xhosa)České uživatelské rozhraní
Porovnání s překladem: American Standard Version Basic English Bible Darby Version Kempton Translation King James Version Webster's Bible World English Bible Young's Literal Translation 한국 성경 (Korean) พระคัมภีร์ไทย Afrikaanse Vertaling 1953 သမ္မာကျမ်း၊၊ Judson (1835) Det Danske Bibel Elberfelder Bibel (1871) Elberfelder Bibel (1905) Lutherbibel (1545) Lutherbibel (1912) Reina Valera (1909) Sagradas Escrituras (1569) Esperanto Biblé Bible Louis Segond (1910) Xhosa Giovanni Diodati Bibbia (1894) Riveduta Bibbia (1927) Litova Biblio Károli (Vizsoly) Biblia മലയാളം ബൈബിൾ Dutch Staten Vertaling Almeida Atualizada синодальный перевод (1876) Pyhä Raamattu (1933/1938) Vuoden 1776 kirkkoraamattu Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Vietnamese Bible (1934) Turkish Bible Arabic: Smith & Van Dyke Hebrew: Modern Greek: Modern 新中文版 (简体) 新中文版(繁体) 联盟版(简体) 联盟版(繁体) Japanese Bible 口語訳聖書
2 Ize nenze idini elinyukayo, libe livumba elithozamisayo kuYehova; ibe nyenye inkunzi entsha, ithole lenkomo, nenkunzi yemvu ibe nyenye, neemvana ezimnyaka mnye ezigqibeleleyo, zibe sixhenxe;
4 nesahlulo seshumi sibe sinye kuyo imvanaimvana enye, kuzo iimvanaiimvana ezisixhenxe;
5 nenkunzi yebhokhwe exhonti ibe nyenye, ibe lidini lesono lokunicamagushela:
7 Ngolweshumi lwaloo nyanga yesixhenxe, kobakho intlanganiso engcwele kuni, niyithobe imiphefumloimiphefumlo yenu. Ize ningenzi msebenzi wakukhonza;
8 nosondeza idini elinyukayo kuYehova, ivumbaivumba elithozamisayo; ibe nyenye inkunzi entsha, ithole lenkomo; nenkunzi yemvu ibe nyenye; neemvana ezimnyaka mnye zibe sixhenxe; zobazoba zezigqibeleleyo kuni;
10 nesahlulo seshumi ngasinye kuyo imvanaimvana inye, kuzo iimvanaiimvana ezisixhenxe;
11 nenkunzi yebhokhwe exhonti ibe nyenye, ibelidini lesono: ngaphandle kwedini lesono lokucamagusha, nedini elinyukayo lamaxesha onke, nomnikelo walo wokudla, kwaneminikelo yawo ethululwayo.
12 Ngosuku lweshumi elinesihlanu lwenyanga yesixhenxe, kobakho intlanganiso engcwele kuni. Ize ningenzi msebenzi wakukhonza. Niya kwenza umthendeleko kuYehova iintsukuiintsuku ezisixhenxe.
13 Nize nisondeze idini elinyukayo, ukudla kwasemlilweni, ivumbaivumba elithozamisayo kuYehova: zibe lishumi elinantathu iinkunzi ezintsha, amathole eenkomo; neenkunzi zezimvu zibe mbinimbini; neemvana ezimnyaka mnye zibe lishumi elinane; zobazoba zezigqibeleleyo;
15 nesahlulo seshumi ngasinye kuyo imvanaimvana inye kuzo iimvanaiimvana ezilishumi elinane;
16 nenkunzi yebhokhwe exhonti ibe nyenye, ibe lidini lesono; ngaphandle kwedini elinyukayo lamaxesha onke, nomnikelo walo wokudla, kwanomnikelo walo othululwayo.
17 Ngosuku lwesibini nosondeza zibe lishumi elinambini iinkunzi ezintsha, amathole eenkomo; neenkunzi zezimvu zibe mbinimbini; neemvana ezimnyaka mnye ezigqibeleleyo, zibe lishumi elinane;
18 nomnikelo wazo wokudla, neminikelo yazo ethululwayo, kuzo iinkunzi ezintsha zeenkomo, nakuzo iinkunzi zezimvu, nakuzo iimvanaiimvana, ngangenani lazo ngokwesiko;
19 nenkunzi yebhokhwe exhonti ibe nyenye, ibe lidini lesono; ngaphandle kwedini elinyukayo lamaxesha onke, nomnikelo walo wokudla, kwaneminikelo yazo ethululwayo.
21 nomnikelo wazo wokudla, neminikelo yazo ethululwayo, kuzo iinkunzi ezintsha zeenkomo, nakuzo iinkunzi zezimvu, nakuzo iimvanaiimvana, ngangenani lazo, ngokwesiko;
22 nenkunzi yebhokhwe ibe nyenye, ibe lidini lesono: ngaphandle kwedini elinyukayo lamaxesha onke, nomnikelo walo wokudla, kwanomnikelo walo othululwayo.
23 Ngosuku lwesine nosondeza iinkunzi ezintsha zeenkomo zibe lishumi, neenkunzi zezimvu zibe mbinimbini, neemvana ezimnyaka mnye ezigqibeleleyo zibe lishumi elinane;
24 nomnikelo wazo wokudla, neminikelo yazo ethululwayo, kuzo iinkunzi ezintsha zeenkomo, nakuzo iinkunzi zezimvu, nakuzo iimvanaiimvana, ngangenani lazo, ngokwesiko;
25 nenkunzi yebhokhwe exhonti ibe nyenye; ngaphandle kwedini elinyukayo lamaxesha onke, nomnikelo walo wokudla, kwanomnikelo walo othululwayo.
26 Ngosuku lwesihlanu nosondeza iinkunzi ezintsha zeenkomo zibe sithoba, neenkunzi zezimvu zibe mbinimbini, neemvana ezimnyaka mnye ezigqibeleleyo zibe lishumi elinane;
27 nomnikelo wazo wokudla, neminikelo yazo ethululwayo, kuzo iinkunzi ezintsha zeenkomo, nakuzo iinkunzi zezimvu, nakuzo iimvanaiimvana, ngangenani lazo, ngokwesiko;
28 nenkunzi yebhokhwe ibe nyenye, ibe lidini lesono; ngaphandle kwedini elinyukayo lamaxesha onke, nomnikelo walo wokudla, kwanomnikelo walo othululwayo.
29 Ngosuku lwesithandathu nosondeza iinkunzi ezintsha zeenkomo zibe sibhozosibhozo: neenkunzi zezimvu zibembini; neemvana ezimnyaka mnye ezigqibeleleyo zibe lishumi elinane;
30 nomnikelo wazo wokudla, neminikelo yazo ethululwayo, kuzo iinkunzi ezintsha zeenkomo, nakuzo iinkunzi zezimvu, nakuzo iimvanaiimvana, ngangenani lazo, ngokwesiko;
31 nenkunzi yebhokhwe ibe nyenye, ibe lidini lesono; ngaphandle kwedini elinyukayo lamaxesha onke, nomnikelo walo wokudla, kwanomnikelo walo othululwayo.
32 Ngosuku lwesixhenxe nosondeza iinkunzi ezintsha zeenkomo zibesixhenxe; neenkunzi zezimvu zibe mbinimbini; neemvana ezimnyaka mnye ezigqibeleleyo zibe lishumi elinane;
33 nomnikelo wazo wokudla, neminikelo yazo ethululwayo, kuzo iinkunzi ezintsha zeenkomo, nakuzo iinkunzi zezimvu, nakuzo iimvanaiimvana, ngangenani lazo, ngokwesiko lazo;
34 nenkunzi yebhokhwe ibe nyenye, ibe lidini lesono: ngaphandle kwedini elinyukayo lamaxesha onke, nomnikelo walo wokudla, kwanomnikelo walo othululwayo.
36 Nosondeza idini elinyukayo, ukudla kwasemlilweni, ivumbaivumba elithozamisayo kuYehova; inkunzi entsha yenkomo ibe nyenye; nenkunzi yemvu ibe nyenye; neemvana ezimnyaka mnye ezigqibeleleyo zibe sixhenxe;
37 nomnikelo wazo wokudla, neminikelo yazo ethululwayo, kuyo inkunzi entsha yenkomo, nakuyo inkunzi yemvu, nakuzo iimvanaiimvana, ngangenani lazo, ngokwesiko;
38 nenkunzi yebhokhwe ibe nyenye, ibe lidini lesono: ngaphandle kwedini elinyukayo lamaxesha onke, nomnikelo walo wokudla, kwanomnikelo walo othululwayo.
40 UMoses wabaxelela oonyanaoonyana bakaSirayeli ngokwezinto zonke, uYehova abemwisele umthethoumthetho ngazo uMoses.